टी–२० विश्वकपबाट तीन विश्व च्याम्पियन टिम बाहिर ! - मनकामनापोष्ट
Written by मनकामनापोष्ट•	November 2, 2021• 10:17 am• अन्तर्राष्ट्रिय, खेलकुद, ताजा अपडेट, मनकामनापोष्ट स्पेसल
टी–२० विश्वकपबाट तीन विश्व च्याम्पियन टिम बाहिर !
काठमाडौं,कात्तिक १६ गते । टी–२० विश्वकप २०२१ को उपाधि जित्ने लक्ष्यका साथ सबै टोली युएईमा छन्। अहिलेसम्म करिब आधा प्रतियोगिता सकिएको छ। इंग्ल्यान्ड सेमिफाइनलमा पुगिसकेको छ भने पाकिस्तान पनि लगभग सेमिफाइनलमा पुग्ने चरणमा छ।
पाकिस्तान समूह २ को शीर्ष स्थानमा रहँदा इंग्ल्यान्ड समूह १ को शीर्ष स्थानमा छ। तर, तीन पूर्व टी–२० विश्वकप च्याम्पियन टोली अहिलेको विश्वकपबाट बाहिरिने संघारमा छन्। ती टोलीहरू हुन्, भारत, श्रीलंका र वेस्ट इन्डिज।
२०२१ को टी–२० विश्वकप भारतीय टोलीका लागि दुखद रह्यो। भारतलाई उपाधि दाबेदार टिमका रूपमा हेरिए पनि उसको प्रदर्शन भने सम्झनलायक रहेको छैन। आफ्नो पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग १० विकेटको नमिठो हार बेहोरेको थियो।
र, साथसाथै अफगानिस्तानले न्युजिल्यान्डलाई पराजित गरोस् भन्ने प्रार्थना गर्नुपर्नेछ। भारतले सन् २००७ मा मात्रै टी–२० विश्वकप जितेको थियो।
चारमध्ये तीन खेलमा हार बेहोरेर टी–२० विश्वकपबाट बाहिरिएको टोली हो श्रीलंका। श्रीलंकाले छनोट चरणका सबै तीन खेल जितेको थियो। तर, सुपर १२ मा भने आफ्नो प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिन सकेन।
श्रीलंकाले भारतलाई हराएर २०१४ को टी–२० विश्वकपको उपाधि जितेको थियो। श्रीलंका जुन समूहमा छ, त्यो समूहमा निकै बलियो टोली छन्। जसको अगाडि श्रीलंकाको जादू चल्न सकेन्। धेरै अनुभवी खेलाडी टिम बाहिर भएका कारण श्रीलंका कमजोर भएको छ।
वेस्ट इन्डिजले अहिलेसम्म तीनमध्ये एउटा मात्र खेल जितेको छ। उसलाई सेमिफाइनल पुग्न पनि कठिन छ। वेस्ट इन्डिजले २०१२ र २०१६ मा दुई पटक टी–२० विश्वकपको उपाधि जितेको थियो। तर, यसपालि राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेको छैन।
टी–२० विश्वकप २०२१ मा अहिलेसम्म इंग्ल्यान्ड मात्र सेमिफाइनलमा पुगेको छ। टोलीले अहिलेसम्म खेलेका चारवटै खेल जितेको छ। जोस बटलरको शतकको मद्दतले इंग्ल्यान्डले श्रीलंकालाई सोमबार २६ रनले पराजित गरेको हो।
इंग्ल्यान्डले सन् २०१० मा टी–२० विश्वकपको उपाधि जितेको थियो। जारी विश्वकपमा इंग्लिस टोली लयमा छ। बलर र ब्याट्सम्यानले राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
टी–२० विश्वकप विजेता टोलीहरू